‘Waadaan Yoo Abiy Ahmed Afrikaa Kibbaa Daawwatan Nuuf Seename Haga YoonaaMeerre?’ Lammilee Itiyoophiya Afrikaa Kibbaa Jiraatan
Bitootessa 12, 2020
‘Waadaan Yoo Abiy Ahmed Afrikaa Kibbaa Daawwatan Nuuf Seename Haga Yoonaa Meerre?’ Lammilee Itiyoophiya Afrikaa Kibbaa Jiraatan
Ji’a amajjjii darbe Muummeen Ministiraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed biyya Afriikaa Kibbaa yoo daawwatan waadaan lammileen Itiyoophiyaa biyyas jiraataniif seename homtuu hin raawwannee ittuuyyu urakkoo keessa seennee jedhu.
Dhalattoonni oromoo yaada isaanii VOA’f himan; Amajjii jalqaba guyyoota lamaaf ka biyyattii turan Muummeen Ministiraa Abiy Ahmed rakkoo waraqaa eyyama jireenyaa qabdanuuf isiniif gaafadhee deebii gaarii mootummaan biyyattii naa kenneeraa jechaan yos nutti himanus ammaa garuu baqattootaaf furmaatni taa’e hin jiru jedhan.
Hundumaan lammii Oromoo Afrikaa Kibbaa ganna 8’ jiraatedha. Innis Abbaa daa’ima tokkoo ta’uu dubbatee; Muummeen Ministiraa Abiy kan dhufaniif baqattootaaf furmaata barbaaduuf miti jechuun morma. Waanti inni mormes, namni tokko yoo waraqaa Koolu – galtummaan jiraatu mootumman biyya inni’rraa baqate tokko dhufee biyya baqaatti waraqaa eyyama siif gaafachuuf mirga hin qabu jedha. Itti dabalees Hundumaan Ministirri Muummee Abiy Ahmed warra baqattummaan jiraataniif homaa akka hin gaafanne ‘Siyaasa ofiif’ jecha dhufanis jedha.
Hundumaan amma Waajjirri Mootummaa Dhimma Keessoo Afriikaa kibbaa inumaattuu erga Muummeen ministiraa dhufanii as eyyama duraan yeroon nuuf kennaa ture nurraa gabaabsaa jira kanaaf rakkoorra jirraa jedhe. Dargaggoon Oromoo kun warri waraqaa hin qabne amma waraqaa haareffachguuf seeraan ala gara birrii kuma 30 kaffalanii haareffataa jiru jedha. Waajjirri Dhimma Keessoo Afriikaa Kibbaas humnaan biyyatti nu deebisuuf hedduu dhaadataa jiraachuu dabalee hime. Kana jelaa bahuufis lammileen baqaan Afriikaa Kibbaa jiraatan haala biyya keessa jiru isaan hubachiisuuf karaa warra seeraa yaalaa akka jiran hime baqataan Oromoo kun. Bayyaan Alii Ahmed baqataan waa’ee waadaa ji’a Amajjii darbe baqattootaaf seenamee dubbatedha.
Bayyaan Yeros wal gahii Abiy Ahmed irratti argamanirratti hirmaachuu hima; yeros Abiy ‘Dhimmi yaaddoo waraqaa qabdani sichi dhumeera’ dubbii jedhu nuuf dubbatanii turan, amma garuu haalli jiru fuggisoodha jedha. Muummeen Ministeerotaa Abiy Amajjii Keessa Yoo Afriikaa Kibbaa Daawwatan biyyootni 2’n maalirratti walii galanii turan? Daawwii isaanii jalqabaa Afriikaa Kibbaan yeros Abiy Ahmed; kabaja ayyaana Paartii Afriikaan Naashonaal Koongires hirmaatanii achumaanis marroo lama lammilee Itiyoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan duuka mariyatanii turan.
Yerosis Afrikaan Kibbaa fi itiyoophiyaan gama; Fayyaa, Tuurizimii fi Viisaa Diiploomaatotaan mijeessuun waliin hojjechuuf ka isaan dandeessisu walii galtee waloo mallatteessanii turan. Yeroma kanas Muummeen Ministiraa Abiy ka dubbataa turan waan lammilee itiyoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraataniiti. Yeros Afriikaa Kibbaa daawwachuuf turuunkoo haga mootummaan biyyattii fedha fi mirga lammilee eegsisuuf deebii kennu sababa jedhu akka tures Muummeen Ministiraa Abiy dudubbataa turan.
Lammileen Itiyoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraatan VOA’f yoo himan; nami hedduun biyyaa bahee achi jiru keessumaa lammileen Itiyoophiyaa waraqaa Koolu galtummaa gaafatanii argataniin jiraatu male ka Paaspoortiin jiraatu namoota baayyee muraasaa jedhu. Mohaammed Keereddin lammiin Itiyoophiyaa Johaanisberg jiraatu fi Abbaan ijoollee afuriis silaa utuu galmeen harkaa qabnu kun nuuf fooyya’ee hojii hojjennee of jijjiiruuf bu’aa gaarii qaba ture, garuu Imbaasiin itiyoophiyaa dhimma kana hordofuu male haga yoonaa homaa nuuf deebi hin laannes jechuun dubbate. Amajji darbe yeroo walii galteen biyyoota lameenii mallatteeffamee ture kana wanni dubbatamee ture (irratti walii galame jedhame) Abiy Ahmed Muummeen Ministriraa Itiyoophiyaa Pirezdent Raamafoosaa lammileen Itiyoophiyaa eyyama fi galmee malu akka argatan gaafachuudha. Dhimmi kun haa dubbatamu malee haalli raawwii isaa garuu ifaan ka kaa’ame hin turre.
Yoosis, Waajjirri Dhimma Keessoo Afriikaa kibbaa Ministeera Nageenyaa Itiyoophiyaa fi ministeera haaja alaa walin dhimmi kun hojiitti hiikama jedhameet ture. Qaama raawwii waadaa kanaa hordofu keessaa tokko Imbasii Itiyoophiyaa Piritooriyaa jirudha. Gaggeessaan Miisiyoonii Itiyoophiyaa Ambaasaadder Shiferraaw Teklee; gaaffii hedduu VOA’ n isaan gaafate deebisuurraa of qusatanii jiran. Garuu Dhaamsa barreeffamaan deebiisaniin ‘dhimmi kun dhimma hordoffii dheeraa qabu waan ta’eef Mootummaan Itiyoophiyaa waajjirootii Mootummaa Afriikaa Kibbaa waliin kan irratti hojjetu ta’a’ deebii jedhu qofa nuuf kennanii jiran.
Qophii Filannoo fi Rakkolee Mumul’atan. Kutaa 3ffa
Bulchiinsa Oromiyaa:jara daarii Awaashii fi Bordoddee irratti nama nagaa fixe seeraan gaafachuuf jabaannee hojjanna
Gaazzexeessonni ONN Lama Humnoota Mootummaan Hidhamuu Dhaabbatichi Beeksise
Jiraattonni Naannoo Lolichaa Gara Gaambellaatti Dheessaa Jiran, Jedhama
Itiyoophiyaa Keessa Vaayrasii Koronaan Namni Qabame Hin Jiru Jedhame
Gamoolee Yunivarsitii Maqaalee Goototaa fi Beektotaan Moggaafaman